Idi Ụlọ ọrụ China LR Slurry Pump Parts ụlọ ọrụ na ndị na-ebubata ya |Arex
L-Ụdị Slurry Pump impeller
The roba ihe anyị ji nwere elu iguzogide ihe ndị ọzọ niile na ezi urughuru slurry ngwa.A na-ahazi antioxidants na mgbochi ndị na-emebi emebi na-eji ihe anyị eme ihe iji meziwanye ndụ nchekwa ma belata mmebi n'oge eji.A na-enye nkwụsi ike dị elu site na nchikota nke nkwụsi ike ya dị elu, ike dị elu na ike ike dị ala.
Anyị ji nganga na-arụpụta akụkụ mgbapụta rọba slurry dị mma na akụkụ ndị ọzọ na-anọchi anya ụfọdụ nrụpụta mgbapụta ama ama, nke bụ 100% REVERSE INTERCHANGEABLE.
* Ụdị L-Ụdị Slurry Pump Data impeller:
Nlereanya Koodu impeller Ihe eji eme roba Ibu ngwaahịa (KG)
* Ụdị ihe eji eme rọba na nkọwa data:
R26 Mgbochi okpomọkụRubber mebiri emebi Rubber eke R26 bụ rọba eke dị oji, dị nro.Ọ nwere elu ozize iguzogide ihe ndị ọzọ niile na ezi urughuru slurry ngwa.A na-emezi antioxidants na mgbochi ndị na-eme ihe na RU26 iji meziwanye ndụ nchekwa ma belata mmebi n'oge eji.A na-enye nkwụsi ike dị elu nke RU26 site na nchikota nke nkwụsi ike ya dị elu, ike dị elu na ike siri ike nke Shore dị ala.
R33 Rubber eke(dị nro) Rubber eke YR33 bụ ọkwa dị elu nke rọba eke ojii nke siri ike dị ala ma na-eji ya maka cyclone na pump liners na impellers ebe akụrụngwa anụ ahụ ya dị elu na-enye ụbara ibelata iguzogide ike, nkọ slurries.
R55 Mgbochi okpomọkụRubber eke Rubber eke YR55 bụ rọba eke na-emebi emebi nke ojii.Ọ nwere elu ozize iguzogide ihe ndị ọzọ niile na ezi urughuru slurry ngwa.
S01 EPDM rọba Elastomer sịntetik
S12 Nitrile Rubber Elastomer sịntetik Elastomer YS12 bụ rọba sịntetịt nke a na-ejikarị na ngwa metụtara abụba, mmanụ na waxes.S12 nwere oke mgbochi mbuze.
S31 ChlorosulfonatedPolyethylene (Hypalon) Elastomer sịntetik YS31 bụ elastomer oxidation na okpomọkụ na-eguzogide.Ọ nwere ezigbo nguzozi nke nguzogide kemịkalụ ma acid na hydrocarbons.
S42 Polychloroprene (Neoprene) Elastomer sịntetik Polychloroprene (Neoprene) bụ ike dị elu nke sịntetik elastomer nwere ihe na-agbanwe agbanwe na-adị ntakịrị ala karịa rọba eke.Okpomọkụ anaghị emetụta ya karịa rọba eke, ma nwee oke ihu igwe na nguzogide ozone.Ọ na-egosipụtakwa oke mmanu mmanu.
L-Ụdị Slurry Pump Frame Plate Liner
Slurry mgbapụta rọba liners bụ akụkụ mmiri na rọba lined slurry nfuli nke na-eduzi slurries na mgbapụta mgbapụta.
Ọtụtụ rọba lined slurry nfuli na-eji gbawara agbawa ụdị roba liner, otu bụ frame plate liner, na ọzọ bụ cover plate liner, a Ọdịdị e mere iji mee ka nnọchi dị mfe.
Anyị slurry mgbapụta roba liners na-ejikarị eme na premium eke roba R55 na-enye 1.5 ugboro ndụ ọrụ nke nkịtị liner roba R26.
* L-TYPE SLURRY PUMPS IMPELLER data
Njirimara/Uru Igodo L-TYPE SLURRY Pump
● Ịrụ ọrụ dị arọ nke nwere imewe site-bolt na-enye mfe nhazi ma na-arụpụta obere oge
● Ígwè úkwù nke nwere mkpuchi zuru ezu na-enye ogologo oge, ike na ogologo ndụ ọrụ
● Nnukwu dayameta, ntụgharị nwayọọ nwayọọ, ihe na-arụ ọrụ dị elu (ihe ruru 90%+) na-eme ka ndụ dị arọ na obere ụgwọ ọrụ.
● Akụkụ ndị dị n'ime, nke mepere emepe na-ebelata ọsọ dị n'ime na-eme ka ndụ ike na-eme ka ọ dị ala
● Elastomer siri ike ma ọ bụ ihe mkpuchi ígwè na-enye nguzogide corrosion ka elu yana inye mfe mgbanwe mgbanwe nke liner na n'etiti mixability iji belata ụgwọ ọrụ niile na-akwụ ụgwọ ma na-ebuli ndụ ndụ.
● Emebere ya maka ọrụ siri ike ma na-arụ ọrụ dị elu
● Opekempe osisi/mkpọmkpọ ihe overhang na-ebelata ntugharị ogwe ma na-abawanye ndụ nkwakọ ngwaahịa
● Mgbakọ ụdị nke cartridge na-enye ohere maka mmezi na gburugburu ebe dị ọcha na-ewepụghị mgbapụta ahụ, na-ebute ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ndụ ogologo oge.
● Nhọrọ mgbakọ na-ebu mmanụ griiz ma ọ bụ mmanụ na-eme ka ọ dị mfe na-edozi ma na-ebelata oge
● Gland flush zuru oke, obere eruba, na akàrà centrifugal na-agba ọsọ na-ebelata ojiji mmiri na-ekpofu na-ebelata ụgwọ ọrụ mgbapụta.
● Mechanical akàrà na-ebelata ojiji nke mmiri na-ekpofu mmiri na-ebelata ụgwọ ọrụ mgbapụta
● Elastomers ma ọ bụ alloys na-egbochi mbuze na corrosion dị maka ijikwa ihe siri ike bujuru na/ma ọ bụ ihe na-emebi emebi.
● Mgbapu mmiri slurry dị arọ maka ọkara ruo obere isi
● Ụgbọ njem na-agba ọsọ
* PUMPS SLURRY L-TYPE Mkpuchi Efere data
L-Ụdị Slurry Pump Mkpuchi Efere Liner
Nke gara aga: SAG/AG/Bọọlụ/Rod Milling Rubber Liners
Osote: Igwe ikuku
© Nwebiisinka 20102021: Ikike niile echekwabara.> Ntupu ihuenyo Njikọ Mgbasa Ọla Valve mmanụ ihe mmịfe Njikọ Mgbasawanye Seismic Valve Control Pneumatic 50mm roba hose naagbanwe agbanwe Ngwaahịa niile